उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्न नेपाली काँग्रेसभित्र सकस, कास्कीमा को ? « Kakharaa
उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्न नेपाली काँग्रेसभित्र सकस, कास्कीमा को ?
१० कात्तिक, काठमाडौं । आगामी मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्न नेपाली काँग्रेसभित्र सकस भएको छ । पार्टीको विधानअनुसार उम्मेदवार छनोट नगर्ने र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका उम्मेदवारलाई टिकट नदिई केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्नो खल्तीका नेतालाई टिकट दिने परम्परा कायम रहँदा यस्तो सकस देखिएको हो ।
पार्टीको विधान मिचेर उम्मेदवार छनोट गर्ने अभ्यास केन्द्रीय नेतृत्वबाट विगतमा सुरु भएपछि यस पटक जिल्ला नेतृत्वबाट पनि सोही अभ्यास अपनाइएको भनाइ जिल्ला सभापतिहरूको छ । उपनिर्वाचनमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारको नाम सिफारिश गर्न क्षेत्रीय समितिले बढीमा तीनजनाको नाम पठाउनुपर्नेमा १६ जनासम्मको नाम पठाएको छ । विधानमा तीनजनाको नाम पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।